တစ်သက်တာမှာ ကြည့်ကို ကြည့်ရမယ့် အကောင်းဆုံး ခရီးသွား ဇာတ်ကား (၁၀) ကား
20 Apr 2018 . 5:32 PM
ခရီးသွားတာကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေက ခရီးသွားခြင်းကို စိန်ဝယ်၊ ရွှေဝယ်ရတာနဲ့တောင် မလဲနိုင်ပါဘူးတဲ့။ ခရီးသွားတယ်ဆိုတာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပန်းဖြေနည်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရှုခင်းတွေ ကြည့်ရင်း၊ မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လေ့လာရင်း၊ အစားအသောက်တွေ၊ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို မြည်းစမ်းကြည့်ရင်း ခရီးသွားရတာဟာ ဘဝရဲ့ နိဗ္ဗာန်ပါပဲ။
ဒီမှာတော့ ခရီးသွားရတာ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် အခရာက ညွှန်းချင်တဲ့ အကောင်းဆုံး ခရီးသွားဇာတ်ကား (၁၀) ကားကို လက်တို့လိုက်ပါရစေ။
Ben Stiller ရိုက်ကူးပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဒီကားမှာ Kristen Wig နဲ့ John Daly တို့လည်း တွဲဖက်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ Walter ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ သူစိတ်ကူးထားသမျှထက် စွန့်စားခန်းတွေပါတဲ့ ခရီးကို နှင်ရတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားစရာ ကြည့်ရမှာပါ။
ဒီကားကိုတော့ ဒါရိုက်တာ Walter Salles ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီး Gael Garcia Bernal ၊ Rodrigo De la Serna ၊ Mia Maestro တို့ ပါဝင်ထားပါတယ်။ ချီဂွေဗားရား ငယ်ငယ်တုန်းက ဆိုင်ကယ်စီးခရီးနှင်ခဲ့တဲ့ Road Trip ကို အတ္ထုပတ္တိဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
Scott Erikson ၊ Rebecca Filmer ၊ Sabrina Hezinger တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Brook Silva-Braga က ဒါရိုက်တာ အဖြစ်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ တိုက်ကြီး ၄ တိုက်ကို ဖြတ်သန်းခရီးကြမ်းနှင်သူတွေရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီကားဟာ ခရီးသွားရတာ ကြိုက်သူတွေ သဘောခွေ့မှာပါ။
ဒီကားဟာလည်း ၂၀၀၇ ခုနှစ်ထွက် ဇာတ်ကားပဲ ဖြစ်ပြီး ထိပ်တန်းကျောင်းသားလည်းဖြစ်၊ အားကစားသမားလည်း ဖြစ်တဲ့ Christopher McCandless တစ်ယောက် တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရအပြီးမှာ သူစုထားတဲ့ စုငွေအားလုံးလှူဒါန်းလိုက်ပြီး အလာစကာကို ခြေလျင်ခရီးနှင်ခဲ့ပုံကို ဇာတ်လမ်းဆင် ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ Sean Penn က ရိုက်ကူးထားပြီး Emile Hirsch ၊ Vince Vaughn ၊ Catherine Keener တို့က ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ဒါရိုက်တာ Danny Boyle ရဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ Leonardo DiCaprio ၊ Tilda Swinton ၊ Virginie Ledoyen ၊ Guillaume Canet နဲ့ Robert Carlyle တို့နဲ့ ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ဒီကားဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Phi Phi Island မှာရိုက်ကူးထားတဲ့အတွက် ခရီးသွားတတ်သူတွေ ကြိုက်မယ့် ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ခရီးသွားစွန့်စားခန်းဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Chris Malloy က ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ Yvon Chouinard ၊ Doug Tompkins ၊ Keith Malloy တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကတော့ Comedy-Drama Film အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Wes Anderson က ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ နာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Owen Wilson ၊ Adrien Brody ၊ Waris Ahluwalia ၊ Amara Karan ၊ Barbet Schroeder ၊ Anjelica Huston ၊ Natalie Portman၊ Camilla Rutherford ၊ Irrfan Khan နဲ့ Bill Murray တို့ ပါဝင်ထားပါတယ်။ ဒီကားဟာ အကောင်းမြင်ဝေဖန်မှုတွေတသီကြီး ရရှိခဲ့ပြီး အမြတ်ငွေလည်း တော်တော်ရခဲ့တဲ့ ကားမို့ လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။
ဒီကားကတော့ ဘောလီးဝုဒ်ပရိသတ်တွေ အတွက်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို အဓိပ္ပာယ်ကတော့ You Won’t Get This Life Again ဖြစ်ပါတယ်။ ဟာသနဲ့ မေတ္တာဖွဲ့ရောနှောပေါင်းစပ်ထားပြီး ဒါရိုက်တာ Zoya Akhtar က ရိုက်ကူးတင်ပြထားပါတယ်။
အထူးညွှန်းစရာမလိုတဲ့ Life of Pi ပါ။ ဒါရိုက်တာ Ang Lee က ရိုက်ကူးထားပြီး Suraj Sharma ၊ Irrfan Khan ၊ Rafe Spall ၊ Tabu ၊ Adil Hussain နဲ့ Gerard Depardieu တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဒီကားဟာ Ang Lee အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာ အော်စကာဆုရရှိခဲ့တဲ့ ကားမို့ လုံးဝကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ကားဖြစ်ပါတယ်။
Eat Pray Love ကတော့ နာမည်ကြီး မင်းသမီး Julia Roberts ပါဝင်ပြီး Elizabeth Gilbert ရဲ့ အရောင်းရဆုံး Eat, Pray, Love ကိုပဲ အခြေခံပြီး ပြန်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဒီကားဟာ အဆိုးရော၊ အကောင်းရော ဝေဖန်မှုတွေရခဲ့ပေမယ့် ငွေရေးကြေးရေးပိုင်ဆိုင်ရာအရတော့ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၂၀၄.၆ သန်း ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်း ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပါတယ်။
ကဲ! ဒီခရီးသွားဇာတ်ကားတွေနဲ့ ဒီတစ်ပတ် ပိတ်ရက်ကို ဖြတ်ကျော်လိုက်ရအောင်၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးနဲ့ ကမ္ဘာပတ်ကြတာပေါ့။
တဈသကျတာမှာ ကွညျ့ကို ကွညျ့ရမယျ့ အကောငျးဆုံး ခရီးသှား ဇာတျကား (၁၀) ကား
ခရီးသှားတာကို ကွိုကျနှဈသကျသူတှကေ ခရီးသှားခွငျးကို စိနျဝယျ၊ ရှဝေယျရတာနဲ့တောငျ မလဲနိုငျပါဘူးတဲ့။ ခရီးသှားတယျဆိုတာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အပနျးဖွနေညျးတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။ ရှုခငျးတှေ ကွညျ့ရငျး၊ မတူညီတဲ့ ယဉျကြေးမှုတှကေို လလေ့ာရငျး၊ အစားအသောကျတှေ၊ ဓလထေုံ့းစံတှကေို မွညျးစမျးကွညျ့ရငျး ခရီးသှားရတာဟာ ဘဝရဲ့ နိဗ်ဗာနျပါပဲ။
ဒီမှာတော့ ခရီးသှားရတာ ကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျ အခရာက ညှနျးခငျြတဲ့ အကောငျးဆုံး ခရီးသှားဇာတျကား (၁၀) ကားကို လကျတို့လိုကျပါရစေ။
Ben Stiller ရိုကျကူးပွီး ကိုယျတိုငျလညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ဒီကားမှာ Kristen Wig နဲ့ John Daly တို့လညျး တှဲဖကျပါဝငျသရုပျဆောငျထားကွပါတယျ။ Walter ဆိုတဲ့ လူတဈယောကျဟာ သူစိတျကူးထားသမြှထကျ စှနျ့စားခနျးတှပေါတဲ့ ခရီးကို နှငျရတဲ့ ဇာတျကွောငျးကို စိတျဝငျစားစရာ ကွညျ့ရမှာပါ။
ဒီကားကိုတော့ ဒါရိုကျတာ Walter Salles ရိုကျကူးတငျဆကျထားပွီး Gael Garcia Bernal ၊ Rodrigo De la Serna ၊ Mia Maestro တို့ ပါဝငျထားပါတယျ။ ခြီဂှဗေားရား ငယျငယျတုနျးက ဆိုငျကယျစီးခရီးနှငျခဲ့တဲ့ Road Trip ကို အတ်ထုပတ်တိဆနျဆနျရိုကျကူးထားတဲ့ ဒီဇာတျကားဟာလညျး စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။
Scott Erikson ၊ Rebecca Filmer ၊ Sabrina Hezinger တို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပွီး Brook Silva-Braga က ဒါရိုကျတာ အဖွဈရိုကျကူးထားပါတယျ။ တိုကျကွီး ၄ တိုကျကို ဖွတျသနျးခရီးကွမျးနှငျသူတှရေဲ့ ဇာတျကွောငျးကို ရိုကျကူးထားတဲ့ ဒီကားဟာ ခရီးသှားရတာ ကွိုကျသူတှေ သဘောခှမှေ့ာပါ။
ဒီကားဟာလညျး ၂၀၀၇ ခုနှဈထှကျ ဇာတျကားပဲ ဖွဈပွီး ထိပျတနျးကြောငျးသားလညျးဖွဈ၊ အားကစားသမားလညျး ဖွဈတဲ့ Christopher McCandless တဈယောကျ တက်ကသိုလျက ဘှဲ့ရအပွီးမှာ သူစုထားတဲ့ စုငှအေားလုံးလှူဒါနျးလိုကျပွီး အလာစကာကို ခွလေငျြခရီးနှငျခဲ့ပုံကို ဇာတျလမျးဆငျ ရိုကျကူးထားပါတယျ။ Sean Penn က ရိုကျကူးထားပွီး Emile Hirsch ၊ Vince Vaughn ၊ Catherine Keener တို့က ခေါငျးဆောငျပါဝငျထားပါတယျ။
ဒီဇာတျကားကတော့ ဒါရိုကျတာ Danny Boyle ရဲ့ ဇာတျကားဖွဈပွီးတော့ Leonardo DiCaprio ၊ Tilda Swinton ၊ Virginie Ledoyen ၊ Guillaume Canet နဲ့ Robert Carlyle တို့နဲ့ ရိုကျကူးထားပါတယျ။ ဒီကားဟာ ထိုငျးနိုငျငံမှာရှိတဲ့ Phi Phi Island မှာရိုကျကူးထားတဲ့အတှကျ ခရီးသှားတတျသူတှေ ကွိုကျမယျ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျကားကတော့ ခရီးသှားစှနျ့စားခနျးဇာတျကားဖွဈပွီး ဒါရိုကျတာ Chris Malloy က ရိုကျကူးထားပါတယျ။ Yvon Chouinard ၊ Doug Tompkins ၊ Keith Malloy တို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျကားကတော့ Comedy-Drama Film အမြိုးအစားဖွဈပွီး ဒါရိုကျတာ Wes Anderson က ရိုကျကူးတငျဆကျထားပါတယျ။ နာမညျကွီးတှဖွေဈတဲ့ Owen Wilson ၊ Adrien Brody ၊ Waris Ahluwalia ၊ Amara Karan ၊ Barbet Schroeder ၊ Anjelica Huston ၊ Natalie Portman၊ Camilla Rutherford ၊ Irrfan Khan နဲ့ Bill Murray တို့ ပါဝငျထားပါတယျ။ ဒီကားဟာ အကောငျးမွငျဝဖေနျမှုတှတေသီကွီး ရရှိခဲ့ပွီး အမွတျငှလေညျး တျောတျောရခဲ့တဲ့ ကားမို့ လကျမလှတျတမျးကွညျ့သငျ့ပါတယျ။
ဒီကားကတော့ ဘောလီးဝုဒျပရိသတျတှေ အတှကျဖွဈပွီး အင်ျဂလိပျလို အဓိပ်ပာယျကတော့ You Won’t Get This Life Again ဖွဈပါတယျ။ ဟာသနဲ့ မတ်ေတာဖှဲ့ရောနှောပေါငျးစပျထားပွီး ဒါရိုကျတာ Zoya Akhtar က ရိုကျကူးတငျပွထားပါတယျ။
အထူးညှနျးစရာမလိုတဲ့ Life of Pi ပါ။ ဒါရိုကျတာ Ang Lee က ရိုကျကူးထားပွီး Suraj Sharma ၊ Irrfan Khan ၊ Rafe Spall ၊ Tabu ၊ Adil Hussain နဲ့ Gerard Depardieu တို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ဒီကားဟာ Ang Lee အကောငျးဆုံး ဒါရိုကျတာ အျောစကာဆုရရှိခဲ့တဲ့ ကားမို့ လုံးဝကွညျ့ရှုသငျ့တဲ့ ကားဖွဈပါတယျ။
Eat Pray Love ကတော့ နာမညျကွီး မငျးသမီး Julia Roberts ပါဝငျပွီး Elizabeth Gilbert ရဲ့ အရောငျးရဆုံး Eat, Pray, Love ကိုပဲ အခွခေံပွီး ပွနျရိုကျကူးထားတာပါ။ ဒီကားဟာ အဆိုးရော၊ အကောငျးရော ဝဖေနျမှုတှရေခဲ့ပမေယျ့ ငှရေေးကွေးရေးပိုငျဆိုငျရာအရတော့ အောငျမွငျမှုရရှိခဲ့ပွီး ဒျေါလာ ၂၀၄.၆ သနျး ကမ်ဘာနဲ့အဝှမျး ဝငျငှရေရှိခဲ့ပါတယျ။
ကဲ! ဒီခရီးသှားဇာတျကားတှနေဲ့ ဒီတဈပတျ ပိတျရကျကို ဖွတျကြျောလိုကျရအောငျ၊ ဒါမှမဟုတျလညျး ရုပျရှငျကွညျ့ပွီး စိတျကူးနဲ့ ကမ်ဘာပတျကွတာပေါ့။
Ref : blogrope.com